OpenWatch: Fampiasàna Ny Finday Hahafahan’ny Vahoaka Manara-maso · Global Voices teny Malagasy
OpenWatch: Fampiasàna Ny Finday Hahafahan'ny Vahoaka Manara-maso	Voadika ny 28 Jona 2012 8:31 GMT
· vakio ato ny lahatsoratra nadika [en]	Lahatsoratra notsongain-ny Rising Voices, miaraka amin-ny Global Voices manampy amin-ny fanapariaham-baovaon-ny tsy mbola mahatakatra aterineto loatra ity. · Lahatsoratra rehetra
Misy ny fotoana isian'ireo tetikasa fanaraha-mason'ny vahoaka misy mpanohana ara-bola goavana izay tsy tena misokatra amin'ny daholobe akory na voatokana ho an'ireo sehatra voafaritra manokana. Nefa manome fahafahana ny olon-tsotra hampiasa ny media sosialy sy ireo fitaovana mora vidy tahaka ny finday ny ICT hampitomboana ny mangarahara sy hanamoràna ny fanarahamason'ny vahoaka. Ny OpenWatch dia tetikasan'ny mediam-bahoaka ho fandraisana anjara mampiasa ny teknolojia fitondra mandehandeha mba hampalalaka ny fanarahamason'ny vahoaka ny fanaovana kolikoly sy ny famoretana.
Maro ireo firenena maro no ahitàna governemanta tsy tia ny demokrasia sy mpamoritra manararaotra fahefana sy mirotsaka anatin'ny kolikoly. Hatreto dia misokatra ho an'ireo manampahefana ihany ny teknolojia fanaraha-maso, iza mampametraka ny fanontaniana “Quis custodiet ipsos custodes?” – Iza no manara-maso ireo mpanara-maso? Amin'ny lafiny hafa, mitombo ireo olom-pirenena manana finday takatry ny rehetra sy fitaovana hafa izay lasa mpiampanga izany sy mizara hatrany hatrany porofo momba ny kolikoly sy ny famoretana . Eo no irotsahan'ny OpenWatch an-tsehatra.
Mizara roa ny OpenWatch, rindrambaiko anaty finday ho an'ny Android sy ny iOS izay mitahiry feo sy lahatsary an-katakonana, ary rindrambaiko manana loharano misokatra hanangonana ireo tahiry. Copyright an'ireo mpandrindra sy mpiara-miasa amin'ny OpenWatch avokoa ny zavatra rehetra hita ao anatin'io vohikala io ary navoaka teo ambanin'ny lisansa Creative-Commons Attribution 3.0. Ireo mpampiasa izay tsy manana smartphone hametrahana ireo rindrambaiko ireo dia afaka ihany koa miantso laharana iray hanaovana fandraketana ampitain-davitra mankany amin'ny foto-drafitrasan'ny OpenWatch. Ny tanjona amin'izany dia ny hampiasàna ireo porofo ireo hamborahana ny fampiasàna ny kolikoly sy ny famoretana, ary hanampiana ny fampakarana ireo tompon-andraikitra amin'izany hiatrika fitsarana.
Ito misy lahatsary iray manazava ny fomba fampiasàna ny OpenWatch:
Ireto hazavaina ireto ireo dingana arahana:
Dingana 1: Misintòna iray amin'ireo rindrambaikon'ny OpenWatch: na ny openwatch na ny Cop Recorder. Samy maimaimpoana izy ireo, toy izany ihany koa ny kaodin'ny loharanony.
Dingana 2: Rehefa te-hitahiry antsokosoko feo na lahatsary ianao, sokafy ilay rindrambaiko ary kitiho na ny “Mitahiry Feo” na ny “Mitahiry Lahatsary.” Tonga dia manomboka mandray ilay rindrambaiko avy eo, fa miseho tahaka ny hoe mihidy izany. Raha mikasika ny fitahirizam-peo, hiverina amin'ny fàfana fandraisana izany. Raha mifidy ny hitahiry lahatsary ianao, maty ilay fàfana, tahaka ny hoe novonoina ilay finday.
Dingana 3: Rehefa te-hamarana ny fitahirizanao ianao, avereno sokafana ilay rindrambaiko. Hijanona avy hatrany ilay fitahirizana, ary hasaina ianao hamariparitra an'ilay tahiry. Hiakatra ho ao anatina “lohamilina” voaaro ao amin'ny openwatch.net izany tahiry izany, ary ao no handinihan'ny openwatch izany ary, raha ilaina, hanaovana fanadihadiana lalina kokoa.
Milaza i Rich Jones (23), mpamorona ny OpenWatch fa hevitra nalaina tamin'ny feritreritry ny mpamorona ny WikiLeaks, Julian Assange momba ny “fanaovan-gazety siantifika” ity tetikasa ity, fanaovan-gazety izay mifototra amin'ireo antontan-taratasy na rakitra nefa manome fahafahana ny daholobe hahita ireo loharano fototra ireo ihany koa. Mizara lesona avy ao amin'ny Wikileaks izy – “mba hampisy fahefana ny tetikasa feno fangaraharana iray, tsy azo ekena ny fisiana lesoka.” Mino izy fa ”azo ampiasàna ny crowd-sourcing (fampandraisana anjara ny daholobe) ny fanangonana ny tahirim-baovao tsiambaratelo”.
Vakio ny fanadihadiana niarahana tamin'i Rich Jones ao amin'ny Bilaogy NewsMeBack.
Mangataka anao hanaraka ity tetikasa ity ao amin'ny Twitter sy ny bilaogin'ilay tetikasa.
Voadika ny 28 Jona 2012 8:31 GMT
Fitantaràna hafa momba ny Anglisy Korea Atsimo : Voapanga Ho ‘Mpomba ny Tavaratra’ Ny Pretra Katolika iray Nitsikera Ny Governemanta
English · OpenWatch: Using Mobile To Enable Public Monitoring
Mediam-bahoaka, Fanadihadiana Tranga
Fitantaràna hafa momba ny Fanadihadiana Tranga “Hanaovantsika Sarintany i Nizera”: Fatiman Alher
Tohiny » Orinasa manohana ny takelaka Rising Voices
Afrikaans Albanian Alemàna Amariky Anglisy Arabo Armeniana Aymara Azerbaijani Bahasa Bangla Belarosiana Birmana Boligara Bosniaka Danoà Espaniola Farsi Filipiana Frantsay Frantsay Kiriolona Grika Hebreo Hindi Holandey Hongroà Italiana Japoney Katalana Kazakh Khmer Koreana Kroaty Malagasy Malayalam Masedoniana Nepali Okrainiana Ozbeky Poloney Portigey Romana Rosiana Serba Shinoa Slovaky Sloveniana Swahili Tajik Tetum Thailandey Tiorka Tseky Urdu Wolof Zeorziana Ady & Fifandirana Fahalalahàna miteny Fahasalamàna Fampivelarana Fanabeazana Fanadihadiana Tranga Fanaraha-maso Fanatanjahantena Fandikàna Fandrindràna Fanentanana Fanoherana Fiaviana & Foko Fifandraisana iraisam-pirenena Fifidianana Fikisahana & Fifindrà-monina Fisamborana sy faneriterena Fisoloana vava Fitantanam-pitondrana Fitaovana Fiteny Fivavahana Fizakàna ara-tsaina GVSummit10 Hafanam-po Hafanàm-po an-tserasera Haisoratra Hehy Hetsika amin'ny maha-olombelona Hetsika manokana Hevitra Hiper-barrio Lalàna Media & Fanaovan-gazety Mediam-bahoaka Mozika Mpitsoa-ponenana OLPC Orogoay Politika Sakafo Sarimihetsika Saripika Sendikà Siansa Tafatafa Tanora Tantara Teknolojia Toekarena & Fandraharahàna Tontolo_iainana Tsangatsangana Tsy fitononana anarana Vaovao Vaovao Mafana Vazimba Vehivavy & Miralenta Voina Zavakanto & Kolontsaina Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT) Zon'olombelona anao manokana nomad green tari-dàlana teknolojia-aterineto tetikasa toro-làlana valan-dresaka Lohahevitra Manokana ASTAU Akon'ny RuNet Drop-in Center Feo voarahona Feon'ny Tanoran'i Bandim sy Fandevenana Fihaonan'ny jamba Fitantanana-aterinet GV Face Global Voices Podcast Katroka 7 Miliara Lalao Olaimpika Mibilaogy Miabo Ny Tetezana - The Bridge Resadresaka Hanatsarana ny Tany Ségou Villages Connection Tatitry ny Mpiserasera Teknolojia mampangarahara asa Vehivavy ao Minya-isanandro Zon'olombelona an-tsary bcmd conectandonos dizha-kieru mapping-for-niger micrograntees-2013 naman'i Januaria rv 5 taona rv any ejipta Lahatsoratra miaraka amin'ny Sary Video Vololona71 Lahatsoratra